Accueil > Gazetin'ny nosy > Jirama : Tsy voasahan’ny minisitera intsony
Jirama : Tsy voasahan’ny minisitera intsony
Ny ao anaty vilanin’ny ministeran’ ny angovo dia ifangaroan’ny vary sy ny tsiparifary tsy voavaka izay anisan’ny fositra mampirongatra ny hatezeram-bahoaka. Mihodina ara-dalàna ny jirama raha toa ka jerena amin’ny endrika ety ivelany.Ny tapany ihany ange no mikobana raha ny tolotra zaraina ho an’ny mpanjifa isan’andro raha ny momba ny jiro sy rano malagasy. Miharihary ny fisian’ireo tale vitsivitsy misora-tena ho mpanohana ny filoha teo
aloha Ravalomanana, araka ny fanazavana nomen’ireto mpiasa tao ka tokony hosoloina. Vitan’izy ireo ny mikotrika an-kolaka ny ara-
teknika mba hizotra any amin’ny tsy fahatomombana amin’ny tsy fisitrahan’ny mpanjifa jiro sy rano ara-dalàna. Na dia vao volana vitsy aza ny nanendrena ny minisitry ny angovo Andry Ramaroson dia tokony ho hain’ny mazava ny olona rehetra eo ambany fiadidiany ka hiara-miasa aminy.Tsy
hisy velively ireo tamberin’andraikitra hositrahan’ny mpanjifa raha toa ka mbola olona hitarika any amin’ny famotehana ny orinasa sy ny mpanjifa. Ilaina noho izany ny fijerena ifotony mba hanafoanana ny fitaraina na fahatapahan-jiro sy rano.
Tsy mety mitsahatra ireo kiakan’ny mpanjifa ,saika isan’andro no nandrenesana ny fitarainany. Araka ny fanazavana nomen’ny teknisianina teo anivon’ny orinasa jirama dia tsy azo atao ny
manapaka ny vavarano eny amin’ireny toerana ipetrahan’ny olom-pajankana ambony. Ary ny toerana akaiky azy ireny dia misitraka ny jiro sy rano ara-dalàna. Ho an’ireo toerana manalavitra kosa dia niaina izay fahatapahan-drano izay nandritra ny folo taona raha ny eny Itaosy. Efa ho dimy taona kosa ny eny Ambohijatovo sy Faravohitra. Mbola maro be ny faritra mahazo sy tsy mahazo rano isan’andro. Ny foto-drafitr’asa fanatsarana ny zaridaina eo Ambohijatovo anefa dia tonga ny rano jirama vao haingana. Torak’izany, ny teny Ambohipo vao tsy ela ny nanehoan’ny mponina ny hatezerany. Misy fetra ny fanangonan-drano dia manomboka amin’ny 11ora alina ary mifarana amin’ny 4 ora maraina ho an’ny faritra maro manodidina an’Antananarivo. Ny antony iray lehibe miteraka ny fahatapan-drano etsy sy eroa dia vokatry ny ny fahaverezan-drano be loatra hoy ny teknisiana eo anivon’ny jirama. Misy koa hoy hatrany izy ireo ny tokony hanoloana ireo fantson-drano ho vaovao ka rano madio no tonga any amin’ny tokantranon’ny mpanjifa.Tsy afa-manoatra ny mpanjifa manoloana izany tsy fahaizana mandrindra ny fizarana rano tsy ho tapaka ho an’ny mpanjifa. Nahoana raha zaraina ny rano manerana ny toerana ipetrahan’ireo olompanjakana ambony rehetra mba hisitrahan’ny mpanjifa tsotra toa azy ireo ?